VaBiden naAmai Harris Vovimbisa America Itsva Inobatanidza Vanhu Vose
Mbudzi 08, 2020
Democratic 2020 U.S. presidential nominee Biden and vice presidential nominee Harris celebrate at their election rally in Wilmington
Vakambove mutevedzeri wemutungamiri weAmerica kwematemu maviri, VaJoe Biden, vari kutarisirwa kugadzwa semutungamiri mutsva weAmerica wechimakumi mana nematanhatu gore rinouya musi wa 20 Ndira, zvichitevera kukunda kwavakaita VaDonald Trump musarudzo yemutungamiri weAmerica nemusi weMugovera.
VaBiden, avo vane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa, vakakwanisa kudarika zvigaro zve electoral college mazana maviri nemakumi manomwe zvinodiwa kuti munhu adomwe semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica mushure mekutora zvigaro makumi maviri zvemudunhu rePennsylvania neMugovera.
Vachichingamidza VaBiden pahurongwa hwekupemberera kukunda kwavo murwendo rwekuWhite House, vari kutarisirwa kugadzwa semutevedzeri waVaBiden gore rinouya, Amai Kamala Harris, vakati America yakasarudza mutungamiri wayinoda, vakati vanonzwa manyuku nyuku kuchingamidza kuruzhinji rwevanhu, mutungamiri mutsva weAmerica.
Kamala Harris speaks at their election rally in Wilmington
Vachitaura pamhemberero dzekukunda kwavo dzakaitwa neMugovera manheru mudunhu reDelaware, VaBiden vakati bato ravo rakakunda zvine mutsindo usati wamboitika munhoroondo yesarudzo dzemu America.
Vakati vakawana mavoti anodarika mamiriyoni makumi manomwe nemana, kana kuti mavhoti anodarika 74 million votes.
VaBiden vakatora mukana uyu kutenda zvakadzama vanhu vakavavhotera kuti vapinde panyanga.
VaBiden vakaratidzawo kutenda kukuru kuvanhu vatema vemuAmerica vakavavhotera vachiti vachange vari mutungamiri wemunhu wese, kwete webato rimwe chete.
Democratic 2020 U.S. Joe Biden speaks at his election rally in Wilmington
Vakabudawo pachena kuti basa ravo rekutanga vava muhofisi, ndere kurwisa chirwere cheCovid-19, kuona kuti munyika mapodza marwadzo akakonzerwa nehutongi husina kunaka, pamwe nekuona kuti America yaremekedzwa zvakare pasi rose.
Vachitaura vasati vachingamidza VaBiden, Amai Harris vakati kunyange hazvo vari mudzimai wekutanga kutora basa iri, havasi kuzoita mudzimai wekupedzisira kuva nechinzvimbo chakakosha kudai uye kupinda kwavo pachigaro ichi kunopa tarisiro yakanaka kune remangwana revanasikana vechidiki vari kuona shanduko ichiitika.
Vakati kupinda kwavo pachinzvimbo chakadai kunopawo tarisiro kune vanhu vakawanda sezvo America iri nyika inopa mukana kumunhu wese.
Amai Harris vakapinda munhoroondo yekutanga muAmerica yemakore mazana maviri nemakumi mana nemana kuva mudzimai wekutanga achange ari mutevedzeri wemutungamiri weAmerica.
Asi Amai Harris havasi mudzimai wekutanga kupinda musarudzo yemapato ezvematongerwo enyika vachida kuzoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Amai Sarah Palin veRepublican Party, vakadomwa namuchakabvu,Va John McCain, avo vakange vakunda musarudzo yeRepublican Party yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri weAmerica, kuti vave mutevedzeri vavo musarudzo yemutungamiri wenyika wavo musi wa 29 Nyamavhuvhu 2008, vakazotambirwa zviri pamutemo neRepublican National Convention musi wa 3 Gunyana 2008.
Asi tiketi raVaMcCain naAmai Palin rakazokundwa musarudzo dzakaitwa musi wa 4 Mbudzi 2008 netiketi raVaBarack Obama naVaBiden.
Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America, VaTawanda Dzvokora, vanoti sebato, vanofara nekusarudzwa kwaVaBiden naAmai Harris.
VaDzvokora vanoti sarudzo dzemuAmerica munongedzo wakanaka wemaitirwo esarudzo.
Sachigaro veZanu PF mudunhu reNorth America, VaRegis Charumbira, vanotiwo kunyange hazvo vange vachishanda naVaTrump, vanoti nematambudziko ezvematongerwo enyika kumurume uyu, uyo akashanda kwetemu imwe chete ari panyanga kubva muna Ndira 2017.
VaCharumbira vanorumbidzawo kupinda kwaAmai Harris muchigaro chechipiri chakakosha muAmerica.
VaBiden vakashanda vari mutevedzeri waVaObama kubva muna 2009 kusvika muna Ndira 2017, apo pakatoreswa VaTrump mhiko yekuva mutungamiri wenyika mushure mekukunda Amai Hilary Clinton musarudzo yakaitwa muna Mbudzi 2016.
VaBiden vakashandawo senhengo yedare Senate kwemakore makumi matatu nematanhatu.
Kunyange hazvo VaBiden vakaita mhemberero dzekukunda musarudzo yemutungamiri weAmerica, VaTrump vanoti vari kupikisa zvakabuda mumamwe matunhu vachiti sarudzo idzi dzakabiridzira.
Magweta aVaTrump, achitungamirwa nevaimbove meya weNew York, Va Rudi Giuliani, anoti ari kuenda kumatare achipikisa zvakabuda musarudzo dza2020.
VaGiuliani vakaudza vatori venhau neMugovera manheru kuti vane humbowo hunoratidza kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka mudunhu re Pennsylvania nemamwe matunhu izvo zviri kupa kuti vaende kumatare.
Vachinyora pa Twitter yavo nemusi weSvondo mangwanani, Va Trump vakati michina yemumaguta makuru ine huori.
Vakatiwo sangano rinoongorora zvinobuda musarudzo muBritain rakanyorawo kuti sarudzo dzemuAmerica dzakabiridzirwa, uye kuti hazviiti kufunga kuti Va Biden vakakunda zvakawanikwa naVa Obama mumamwe matunhu musarudzo dza 2008.
VaTrump vakatiwo vatotanga kupenengura zvakavhotwa, vachiti America ine nhoroondo yekusafambisa sarudzo zvakanaka.
Nyaya Ina Ray Choto
VaMalaba Vachakwanisa Kuva Mutongi Gava Here? Magweta Opesana Maonero
Grain Millers Association of Zimbabwe Yofarira Kurambidzwa kweChibage Kupinda Munyika
Vagari Vopengera Kanzuru yeMasvingo Iri Kuitira Musangano Wayo kuBulawayo